क्रिकेटका पाँच अविश्वसनिय घटनाहरु | Hamro Khelkud
क्रिकेटका पाँच अविश्वसनिय घटनाहरु
एजेन्सी – क्रिकेट एक रोचक र एक अविश्वसनिय खेल हो । क्रिकेटमा अन्तिम बल र विकेट हुन सम्म नतिजा जे पनि र जतापनि जान सक्छ । भनिन्छ क्रिकेटमा असम्भव केहि हुँदैन ।
केहि नतिजा र घटना यस्ता हुन्छन्, जो विश्वास गर्ननै निकै मुश्किल पर्छ । पछिल्लो समय सिमित ओभरका खेलले क्रिकेट झनै लोकप्रिय र रोमाञ्चक बन्दै गएको छ । विशेष त टि२० शैलीको क्रिकेटबाट । क्रिकेटका केहि नतिजा लामो समयसम्म स्मरण हुन्छन् भने केहि छोटो समयमा सिमित हुन्छन् । जुन प्रतियोगिता महत्व, प्रदर्शन र प्रतिस्पर्धामा निर्भर रहन्छ । विश्व क्रिकेटमा कहिले काहिँ अप्रिय र अविश्वसनिय घटना घट्नुको साथै नतिजाहरु आउँछन् । जुन कल्पना र अपेक्षा भन्दा बाहिर हुन्छ । ती घटना वा दृश्व विश्वास गर्न मुश्किल पर्छ ।
सपना जस्तो लागेपनि तर सत्य र यर्थाथ हुन्छन् । त्यसैले त क्रिकेटको मज्जानै बेग्लै हुन्छ । नेपाली क्रिकेटमा पनि त्यस्ता केहि घटनाहरु छन् । जसमा विश्वका पाँच अविश्वसनिय घटना मध्य एक नेपाली क्रिकेटको दौरानमा छ । ती अविश्वसनिय अनौठा घटानहरुको बारे छोटकरीमा जानकारी ।
५. धोनी र डी भिलियर्सले विकेटकिपरसँगै बलिङ गर्नु
भारतीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी र दक्षिण अफ्रिका एवि डिभिलियर्स विश्व क्रिकेटका सफल ब्याट्सम्यान हुन् । यी दुई खेलाडीको ब्याटिङ हेर्न जो कोहीलाई आनन्द आउँछ । विश्वभर यी दुई खेलाडीका समर्थक सुभचिन्तक छन् । विश्व क्रिकेटमा विकेटकिपरले बिरलै बलिङ गर्दछन् ।
सन् २०१३ को कुरा हो । भारत तीन ओडिआई र दुई टेष्ट सिरिजको लागि दक्षिण अफ्रिका भ्रमणमा थियो । अहिले जस्तो होईन, त्यस समय दक्षिण अफ्रिका विश्वकै एक उत्कृष्ट मध्य थियो । त्यसैले उसलाई उसकै भूमिका हराउन विश्वका जुनसुकै टोलीलाई निकै मुश्किल पर्दथ्यो । तीन खेलको ओडिआई सिरिज दक्षिण अफ्रिकाले २–० ले जितेको थियो । अन्तिम खेल पूरा नहुँदा रद्द भएको थियो । दुवै खेलको जितको रन अन्तर एक सयमाथि थियो ।
दुई टेष्टको सिरिज अन्तर्गत पहिलो टेष्टको दुई दिनको ब्याटिङले ड्र (बराबरी) को संकेट दिएको थियो । पहिलो टेष्टको तेस्रो दिन एबी डिभिलियर्स आफ्नो विकेटकिपरको गल्भ्स र प्याड्स हसिम अमलालाई दिँदै ४० औं ओभरमा बलिङ गर्दै सबैलाई आश्चर्य पारेका थिए । डिभिलियर्सले मिडियम पेश बलिङ गर्दा क्रिजमा विराट कोहली र चेतेश्वर पुजारा थिए । डी भिलियर्स उक्त ओभरमा ५ रन खर्चेका थिए । त्यसपछि भने बलिङ गरेनन् ।
चौथो दिन धोनीले आश्चर्य पार्दै बलिङ गरे । चौथो दिनको खेल सकिन चार ओभर बाँकी थियो । धोनीले खेललाई निकै रोमाञ्चक बनाए । एक्कासी आफ्नो गल्भ्स र प्याड्स उतारे विराट कोहलीलाई दिँदै ४२ औं ओभरमा मिडियम पेश बलिङ गरेका थिए । क्रिजमा फाफ डु प्लेसिस र एल्भिरो पिटरसन थिए । उक्त ओभरमा दुई रन खर्चेका धोनीले ४४ औं ओभरमा पनि २ रन खर्चेका थिए । कोहलीले विकेटकिपर गर्दा धोनीले बलिङ गरेका थिए । टेष्ट इतिहासमा पहिलो पटक दुवै टोलीको विकेटकिपरले एकै खेलमा बलिङ गरेका थिए ।
४. टसको सिक्का जमिनमा गाडिनु
२०१९ जुलाई ९, मलेसियाको किनरारा ओभल क्रिकेट मैदानमा एसिसी यू१९ इस्टर्न रिजन प्रतियोगिता फाइनलमा नेपाल र हङकङबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै थियो । नेपालका कप्तान रोहित कुमार पौडेल र हङकङका आदित गोरावोरा टस गर्न क्रिजमा आए । नेपालका कप्तान रोहितले सिक्का फाले । रेफ्री हेड की टेल पर्यो भनेर मैदानमा हेर्न नपाउँदै सिक्का सिधा जमिनमा गाडिन पुग्यो ।
जुन क्रिकेट इतिहासको एक अनौठो र दुर्लभ दृश्य थियो । उक्त सिक्का गाडिन पुगेपछि रोहितले पुन टस गर्नु परेको थियो । रोहितले टस जित्दै बलिङ गर्ने निर्णय लिएका थिए । नेपालले हङकङलाई ६ विकेटले हराउँदै उपाधि जितेको थियो ।
३. सुपर ओभरमा शून्य रन
२. बल स्टम्पमा लाग्दै छक्का जानु
इंग्ल्यान्डका तीव्र गतिका बलर जोफ्रा आर्चर बाउन्सर लागि वर्तमान समयका चर्चित खेलाडी हुन् । आर्चर तीव्र गतिको स्पीडमार्फत ब्याट्सम्यानलाई दबाबमा राख्न सक्ने बलर हुन् । १ सय ५० माथिको प्रतिघण्टा किलोमिरटको रफ्तारमा बलिङ गर्ने आर्चरले इंग्ल्यान्डलाई २०१९ मा घरेलु मैदानमा एकदिवसिय विश्वकप उपाधि जिताउन सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
१. एक बलमा २ सय ८६ रन
यो पनि पढ्नुहोस : क्रिकेटका पाँच अप्रत्याशित क्षण